Mapurisa Obvunzurudza Mudzimai neVana vaVaMusengezi Vari Kuti VaMnangagwa Havana Kusarudzwa Zviri paMutemo
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangangwa nemutongi mukuru wematare VaLuke Malaba
Nhengo yeZanu-PF VaSybeth Musengezi vakasungwa nemusi weChipiri vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakhadi reZanu-PF vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi.
Gweta raVaMusengezi VaNqobani Sithole vaudza Studio 7 kuti mapurisa neChitatu akavaudza kuti a vasangane navo kudare asi achibva aenda ega naVaMusengezi kumba kwavo uko atanga kubvunzurudza mudzimai wavo nevana.
Mapurisa ari kuramba kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso achiti vanozotiza. Mapurisa audza dare kuti VaMusengezi vane imba nemabhizimis kuSouth Africa nekudaro vanozotiza. Asi magweta avo anoti hakuna kwavari kuenda.
VaMusengezi vakaendesawo vakuru vebato reZanu-PF kumatare vachiti mutungamiri waro VaEmmerson Mnangagwa havana kutora chigaro pachitevedzerwa mutemo webato pakabviswa pachigaro nemauto mushakabvu Robert Mugabe.
Asi munyori wezvemutemo muZanu-PF VaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 nezuro kuti VaMnangagwa vakatora masimba zviri pamutemo.
Vamwe vebato reZanu-PF vanotiwo Vausengezi havasi nhengo yebato iri. VaMusengezi vanoti inhengo yakakwana asi pane vamwe mudare iri vave kuda kuvatyisidzira.
Hurukuro naVaNqobani Sithole